Hultsfredshemester | Hultsfred သို့သွားပါ
ကျွန်ုပ်တို့အားနေထိုင်သူများအားလုံးကို Hultsfredshemester သို့ဖိတ်ကြားပါသည်။
ဒါက Hultsfredshemester ပါ!
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ၊ မြူနီစီပယ်များနှင့်နေထိုင်သူများသည် Hultsfredshemester ကိုဖန်တီးကြသည်။
ဟိုတယ်၊ ညအိပ်ယာယီစခန်းချခြင်းနှင့်တည်းခိုခန်းတစ်ခု၌ည ၁၀၀၀ ည်သို့မဟုတ်သင်ချစ်ရသူများကိုပေးဆပ်ရန်!
သင့်အိမ်၊ သင့် Hultsfred အိမ်တွင်လှပသော Hultsfred မြူနီစီပယ်ကို and နှင့် ၀ ယ်ပါ
- မြှို့နယ်၏စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ကဖေးများ၌စားသောက်ရန် gofika တစ်ခုသို့မဟုတ်ကိုက်ရန်ရှိသည်။
ညပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်ယှဉ်ပြိုင်ပါ ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ၊
တည်းခိုခန်း၊ စခန်းချသည့်နေရာ အိမ်တွင်း၌၎င်း၊
တစ် ဦး gofika သို့မဟုတ်အစားအစာတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းယူပါ။
ဇွန်လ ၁ ရက်မှဒီဇင်ဘာ ၃၁ အတွင်းသင့်အိမ်သည်ညတည်းခိုနိုင်လျှင်သို့မဟုတ်ချစ်ရသူများကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောနေရာထိုင်ခင်းများတွင်ပြိုင်ပွဲများကိုမတူညီသောအချိန်များတွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပြိုင်ပွဲများတွင်ပါဝင်ရန်နေရာထိုင်ခင်းကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။ သင်၏အိမ်သည်အိမ်များအားလုံးတွင်ပြိုင်ပွဲများတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သော်လည်းနေထိုင်သူတစ် ဦး လျှင်တစ်ကြိမ်သာအနိုင်ရရှိနိုင်သည်။
၎င်းသည် Hultsfred ကိုမြေပုံပေါ်တွင်တင်ခဲ့ပြီးဟယ်လ်ဖရက်ရှိအခြားမည်သည့်နေရာမှမဆို Hotell Hulingen ကဲ့သို့မြို့ရိုးအတွင်းနက်ရှိုင်းသောဂီတဖြစ်သည်။ Metallica, HåkanHellströmနဲ့အိပ်ပျော်သွားတာဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Amy Winehouse ။ အခန်းတိုင်းသည်အလွန်ထူးခြားသောအနုပညာရှင်တစ် ဦး ထံအပ်နှံထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုံပိုင်းခြေ? ထိုသူအပေါင်းတို့သည် Hultsfred ၌ကစားခဲ့ကြသည်!
Hultsfred မီးရထားဘူတာရုံအနီးတွင်တည်ရှိပြီးပျူငှါနွေးထွေးသောဟိုတယ်။ အဆိုပါဟိုတယ်ကို ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးသမိုင်းကြောင်းရှည်ခဲ့သည်။ အသက် ၉၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော Maja Nyblom သည်ဟိုတယ်တစ်ခုတည်းတွင်သူမနှင့်သူမနှင့်သူမအနေဖြင့် ၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်လွှဲပြောင်းယူခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကျော်ကြားသောမျက်နှာများသည် Maja နှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့သည်။
Målilla Hotell သည်Målillaဒေသခံသမိုင်းပန်းခြံ၊ သဘာဝနှင့်အခြားလှုပ်ရှားမှုများနှင့်နီးသောဟိုတယ်လေးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင်သင်အဆင်ပြေစွာနေထိုင်သည်၊ Smalspåret, Virserums Konsthall နှင့်အခြားသောလုပ်ဆောင်မှုများစွာနှင့်နီးကပ်သည်။ အများဆုံးသောအရာနှင့်နီးစပ်သောအိမ်။
Hultsfred ၏မြောက်ပိုင်းတွင်ကျေးလက်ဒေသရှိရေကူးtoရိယာ၊ လမ်းကျဉ်းကျဉ်းနှင့်လှပသောလမ်းလျှောက်သည့်နေရာများရှိ Kloster ခြံဖြစ်သည်။
ကမ်းခြေဘေးတွင်နေထိုင်ပြီးရေကူးပါ။ စခန်းချနေရာသည်လှပသော Hulingen ရေကန် Hultsfred တွင်တည်ရှိသည်။ နေပူရှိရေခဲမုန့်တစ်လုံး၊ ရေကန်သို့နင်းလာသည့်လှေသို့မဟုတ်စီးနင်းလှေတစ်စီးနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။
အဆိုပါဘော်ဒါဆောင် Emil Lönneberga၏ဆင်ခြေဖုံးတွင်တည်ရှိသည်! သဘာဝနှင့်အတွေ့အကြုံများမှအနီးကပ်။
ပါ ၀ င်သူတစ် ဦး ချင်းစီသည်ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့် ၄ င်းတို့၏လမ်းကြောင်းများသို့ရောင်းချရန်အတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်။ အကယ်၍ သင်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ဘာလုပ်ရမည်ကိုသင်သိလိုပါကနေရာထိုင်ခင်းကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏အိမ်ထောင်စုသည်တစ်ညထက်ပိုသောပြိုင်ဆိုင်မှုများတွင်ပါ ၀ င်နိုင်ပါသလား။2020-12-03T10:54:48+01:00
ကျွန်ုပ်၏အိမ်ထောင်စုသည်တစ်ညထက်ပိုသောပြိုင်ဆိုင်မှုများတွင်ပါ ၀ င်နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်တယ် သင့်အိမ်ထောင်စုကလုပ်နိုင်ပေမဲ့၊ သင်နေထိုင်သူတစ်ယောက်ကိုတစ်ကြိမ်သာအနိုင်ရနိုင်တယ်။
ကျွန်ုပ်သည်အခြားမြှို့နယ်တွင်နေထိုင်သောဆွေမျိုးတစ် ဦး ရှိသည်၊ သူသည်ညအိပ်အနားယူနိုင်ရန်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည်လော။2021-06-02T12:42:10+02:00
ကျွန်ုပ်သည်အခြားမြှို့နယ်တွင်နေထိုင်သောဆွေမျိုးတစ် ဦး ရှိသည်၊ သူသည်ညအိပ်အနားယူနိုင်ရန်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည်လော။
မဟုတ်ဘူး၊ တစ်ခုတည်းကိုသာ မြှို့နယ်အတွက်အိမ်ထောင်စုယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်စုများ နိုင် သို့သော်ပေးပါ ဝေးယနေ့ညအထိတည်းခိုချစ်သူ vid အမြတ်အစွန်း။
မဟုတ်ပါ၊ ပေးပစ်လိုက်စမ်းပါ ချစ်ရသူ.
ကျွန်ုပ်သည်အန္တရာယ်ရှိသည့်အုပ်စုတွင်ပါ ၀ င်ပြီးလူမှုရေးအခင်းအကျင်းများကိုရှောင်ရှားသင့်သည်။ ဒီကမ်းလှမ်းချက်ကိုဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးရနိုင်မလဲ။2021-07-22T14:06:12+02:00
ကျွန်ုပ်သည်အန္တရာယ်ရှိသည့်အုပ်စုတွင်ပါ ၀ င်ပြီးလူမှုရေးအခင်းအကျင်းများကိုရှောင်ရှားသင့်သည်။ ဒီကမ်းလှမ်းချက်ကိုဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးရနိုင်မလဲ။
လှုပ်ရှားမှုများကိုကမ်းလှမ်းသော tourist ည့်သရုပ်ဆောင်များကို ဆက်သွယ်၍ ၎င်းကိုလုံခြုံစိတ်ချရသောနည်းလမ်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်မနိုင်ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ထို့အပြင်ကမ်းလှမ်းမှုများသည်ပိတ်ဆို့မှုကိုလျှော့ချရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာအချိန်ကြာမြင့်စွာတရားဝင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ခရီးသွား accommodation ည့်သည်တစ်ယောက်၏ညတွင်တည်းခိုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့လျှင်အနီးအနားရှိဆွေမျိုးတစ် ဦး ကိုတစ်ညတည်းလှူနိုင်သည်။ ထို့နောက်သူသည်လုံခြုံစွာတွေ့ဆုံနိုင်ရန်တစ်စုံတစ် ဦး ၏အိမ်တွင်မလိုဘဲလာလည်ပတ်နိုင်သည်။